Dropbox inoshandura kodhi kuyambuka-chikuva uchishandisa C ++ | Linux Vakapindwa muropa
Mamwe mazuva apfuura, Vanogadzira Dropbox kuburikidza nepositi mune yepamutemo blog yekushandisa vakafumura nzira yavanoda kutevera maererano nekusimudzira nhare yeako muchinjiko-chikuva application, uko timu yakafunga kuumba yakabatana kodhi kodhi, yezvinangwa zvakasiyana kana mapuratifomu.
Maitiro acho anogona kubatsira zvikwata zvidiki zvine hunyanzvi hushoma, asi kugadzirwa kunodiwa nekukurumidza sezvazvinogona. Kubva 2013, timu yeDropbox yakavimba nezano iri. TOtip kune Android uye iOS mapuratifomu kuburikidza neakasarudzika kodhi base yakavakirwa muC ++. Iyo posvo inotsanangura nei iyo kambani ikozvino ichida yemuno kuvandudza paSwift neKotlin.
"Nekuunganidza kodhi yekodhi yedu nenzira isiri yeyakajairwa, takagara nhaka yezvinhu zvataisazofanira kunetseka nazvo dai takabatana nezvombo zvekutanga izvo vanhu vechitatu vanoshandisa pamwero mukuru." Pakupedzisira, zvaive zvakanyanya zvinodhura kudarika kunyora kodhi. kaviri, "akadaro.
Pakarepo, Dropbox injinjini mhinduro inoratidza kuti kusarudza nzira yemuchinjikwa-chikuva inosvitsa yakawedzera mari yekuvandudza ine chekuita nekutumira tsika maraibhurari uye masisitimu.
Tisingatauri izvo zvine chekuita nekugadziriswa kwemashandisirwo emashandisirwo ebasa kana kudiwa kwekudzidzisa kana kutora vechitatu mapato anokwanisa kuchinjisa kune yakasarudzika software stack.
Zvechokwadi, inosimbisa kuti kusarudza C ++ ye Android uye iOS kuyambuka kwepuratifomu kunogona kutungamira vagadziri kusangana nematambudziko kuti vangadai vasina kuve chizvarwa.
Semuenzaniso, anodaro, kumisikidza sisitimu yekugadzirisa mabasa anomhanya kumashure anogona kuve anofanirwa kuve nawo muC ++ yekuyambuka-chikuva pombi yekuvandudza.
Pane zvakasiyana, Mumwe mainjiniya anotsanangura muDropbox injinjini, harisi dambudziko mune yemuno.
Izvo zvinototaura kuti timu yeDropbox, mukuita, yaifanirwa kumisikidza raibhurari yeJSON yeC ++ 11, pamwe neimwe yekubata zvinongedzo zveNULL.
Injiniya wekambani akaenderera mberi nekusimbisa kuti ari kutendeukira kune dzidziso yekufunga kuti munhu anogona kuvaka imwechete kodhi base yemapuratifomu akawanda.
Muchokwadi, anosimbirira, izvo zvakasarudzika zvepuratifomu yega yega zvinhu izvo zvisingagoni kudzivirirwa.
"Mashandiro anoita chikumbiro kumashure ndeyeplatform yakatarwa, uye unofanirwa kuzvitarisa kubva pakutanga," anodaro.
Pamusoro pekufunga kunokanganisa kodhi iyi, pane izvo zvine chekuita nematurusi ebasa. Mupfungwa iyi, mainjiniya ekambani anokura pamasanhu maviri: kugadzirisa uye kugadziridza chishandiso.
"Ruzivo rwekuzvarwa patsva rwunowanzo kuve rwakakwirira kupfuura C ++ kuburikidza neiyo yakasarudzika IDE yepuratifomu," anonyora, achiwedzera kuti "pamusoro pekunge tabva pamaturusi aripo, taifanirwa kusimudzira kuedza kwekuvandudza kwe vamwe vanokwanisa kutsigira muchinjikwa-chikuva nzira muC ++. «
Chekupedzisira, maererano nedzidziso yekudzidzira uye kuunganidza zvinhu, Eyal Guthmann anoratidza kuti mutambo wepachikuva-wepuratifomu wakavakwa wakakomberedza musimboti weinjiniya vane nhoroondo yakasimba muC ++.
Nekuenda kweyekupedzisira kune zvimwe zvikwata kana makambani, kambani yakaona zvichinyanya kuoma kuzadza tekinoroji yekuchengetedza iyo C ++ base base. Mukati nekunze, kambani yanga yanetseka kudzidziswa uye kutora vanhu pane ino axis, nekuti zvinoita sekunge vashoma vashambadziri vekufambisa vanofarira C ++.
Kufambisa timu kubva kuDropbox kuenda kuchizvarwa kuburikidza neKotlin uye Swift yeApple uye iOS kune mabhenefiti.
Muchokwadi, mutauro weC ++, pamwe chete neC iwe hausisiri kutaura, inoshanda seyakajairika dhinomineta yekugadzirisa matambudziko akadaro.
Izvo hazvina kuoma kufungidzira kuti iro rekutanga boka revanjinjini rakazvisanganisa kune manejimendi ezvimwe zvakakosha zviitiko zve backend. Chete, mibvunzo nezve mhando yeC ++ interface ine tarisiro mapuratifomu inogona kuiswa patafura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Dropbox inoshandura kodhi kuyambuka-chikuva uchishandisa C ++